Savorovoro tao Fianarantsoa Miaramila iray no vaky loha
Miaramila iray no naratra mafy teo amin'ny lohany omaly tolakandro tokony ho tamin'ny 3 ora sasany tany ho any.
Nisy nitoraka ny fiara nitondra ireo mpitandro ny filaminana teny atsimo kelin'ny tobin-tsolika atsimo ao Fianarantsoa, raha ny fampitam-baovao. Nanentana ny olona hanidy fivarotana sy hanao arotava no voalaza fa nahatezitra ilay olon-tsotra nitroatra taminy. Vaky, naratra mafy, noho izany, ny lohan’ity miaramila ity ary nentina avy hatrany teny amin'ny hopitaly. Nidina nikaroka ilay nitoraka ireo mpitandro ny filaminana ary niditra elakela-trano ka andrasana ny tohiny.